धेरै सुत्नु हुन्छ ? सावधान यस्ता रोगबाट बच्नुहोस् – Rapti Khabar
चिकित्सकका अनुसार एक वयस्क मानिस अधिकतम ८ घण्टासम्म मात्र निदाउँदा पर्याप्त हुन्छ ।
सुत्ने समय बेलुका हुनु पर्ने उनीहरुको सुझाव हुन्छ । तर कोरोना संक्रमणकालमा जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाका क्रममा घरभित्रै हुनु पर्दा धेरै मानिस आवश्यकता भन्दा बढि निदाउने गर्दछन् ।
– दिउँसो सुत्ने मानिसको पाचनतन्त्रमा गडबडी हुने संभावना उच्च रहन्छ ।
– आवश्यकताभन्दा बढि निदाउने मानिसलाई खाएको नपच्ने हुन्छ ।
– बढि सुत्ने मानिसहरुमा कब्जियत, ग्यास, अपच लगायत समस्या आइलाग्छ ।
– धेरै सुत्ने मानिसमा मोटोपना बढ्नुको साथै मधुमेहको संभावना उच्च रहन्छ ।
– खानापछि एकछिन आराम त ठिकै हो तर निदाउँदा पेटसम्बन्धी रोग लाग्ने गर्दछ ।
– दिउँसो सुत्ने मानिसमा ज्वरो, गलासम्बन्धी रोग लाग्ने संभावना उच्च रहन्छ ।
– आवश्यकताभन्दा बढि सुत्नेहरुमा स्मरण शक्ति कमजोर, शरीर फुल्ने समस्या हुनसक्छ ।
– पढ्ने विद्यार्थीले लगातार सुत्नु हुदैन । तर लगातार २ घण्टाभन्दा बढि पढ्नु पनि हुदैन ।
– वृद्ध वा बालबालिकाहरु आवश्यकता अनुसार बढि समयसम्म निदाउदा असर पर्दैन ।
दिउँसो सुत्ने बानी कति खतरनाक ?
अहिले देशका लगभग सबै स्थानमा कोरोना संक्रमणको बढ्दो छ । त्यसैले संक्रमण दर रोकथाम र नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
निषेधाज्ञाले घर बाहिर निस्कने मौका मिलेको छैन । दिनभर घरमा रहँदा दिन बिताउने सजिलो माध्यम सुत्नु बनेको छ ।
घरभित्रै कैद भएर बस्नु पर्दा दिक्क मानेर समय कटाउन भन्दै खाना खाए लगत्तै धेरै दिउँसो सुत्ने बानी धेरैमा परेको छ । तर बिरामी वा अस्वस्थ्य नभई दिउँसो सुत्ने बानी निकै हानिकारक हुने गर्दछ ।
यसले तत्काल कुनै ठूलो समस्या नदेखाए पनि कालान्तरमा ठूलो स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
– दिउँसो सुत्ने बानीले कालान्तरमा कलेजो क्यान्सरको खतरा हुने गर्दछ ।
– दिउँसो एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा टाइप टु डायबिटिजको खतरा हुने गर्दछ ।
– मुटुसम्बन्धी रोग, ब्रेन स्ट्रोक कारक पनि दिउँसोको सुताई हुने गर्दछ ।
– दिउँसो सुत्ने मानिसहरुमा भोक धेरै हुन्छ जसले ब्लड सुगर बढाउँने गर्दछ ।
– डायबिटिज वा मोटोपनका कारण पनि लिभर क्यान्सरको खतरा रहन्छ ।
दिउँसो केहि मिनेट मात्र आराम गरेमा यसले कुनै असर गर्दैन । तर लामो निन्द्रामा भने पर्नु हुदैन । आराम गर्दा प्राकृतिक हावा लाग्ने स्थान हुनु पर्दछ ।